ဘိုးတော် Junior Member
Given 28 thank(s) in4post(s)
07-21-2016, 10:36 AM (This post was last modified: 07-21-2016, 11:03 AM by ဘိုးတော်.)
ဒီနေရာလေးမှာ Sex Chat အတွေ့အကြုံလေးတွေ ရှယ်ကြရအောင်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ Sex Chat အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ဒီနေရာမှာ တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
nay kg lar?at home??ဘာလုပ်နေလဲအလုပ်များနေတာလားဟင်
ပျင်းရင် ချက်ကြမယ်လေ… ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ ချက်မယ် moe: အင်း
me: ပျင်းရင် အင်တာနက်က ဗီဒီယိုလေး ဘာလေးကြည့်ပါလား
moe: အဲ့လောက် လိုင်းမကောင်းပါ
me: တို့ဆို တယောက်တည်း ပျင်းရင် အင်တာနက်က မြန်မာဝက်ဆိုက်က အတွဲကားလေးတွေကြည့်ရင်း စိတ်ဖြေရတယ်
ဒေါက်တာမလေး ၀က်ဆိုက်က ကားလေးတွေ ကောင်းတယ်လူငယ် စုံတွဲကားလေးတွေများတယ်http://www.doctormalay.com/အဲဒီလင့်ကို ၀င်ကြည့်
me: ၀င်လို့ရလား…. တို့နဲ့ချက်ရတာ ပျင်းနေပြီလားဖေ့ဘွတ်အကောင့်ပေးပါလား
moe: ဖေ့ဘွတ် အကောင့် ပျက်သွားတာ ပြန်မလုပ်တတ်တော့လို့
me: တို့ပြန်လုပ်ပေးမယ်လေ…. အကောင့်နာမည်နဲ့ ပတ်စ်ဝေါ့ပေး
moe: မမှတ်မိတော့ဘူး…. မူဗီ က ကြည့်မ၇ဘူး ထစ်နေတယ်
me: ဟုတ်လား... ဘယ်ကားလေးကြည့်နေတာလဲဘယ်လိုကားမျိုးလေးတွေကြိုက်လဲ
moe: ဟိုဟာ လုပ်တဲ့ ကားပေ့ါ
me: အင်းးး တို့က သမီးရည်းစားတွေ လုပ်ကြတာကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့ ချောင်းရိုက်ထားတဲ့ ကားလေးတွေလဲကြိုက်တယ်အဲဒါတွေက သဘာဝလေးတွေ မြန်မာစုံတွဲတွေ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာလေးတွေကို ပိုကြိုက်တယ်အဲကားလေးတွေ ကြည့်ရင် စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်လဲ
moe: စိတ်ထဲ ယားကျိကျိ ပေါ့
me: တို့ယောက်ကျားလေးတွေကျတော့ အဲလိုကားတွေကြည့်ရင် စိတ်တွေဖြစ်ပြီး တို့ဟာက မာတင်းပြီး တောင်လာတယ် တောင်ပြီး တဆတ်ဆတ်နဲ့ တုန်လာတာ
me: အရမ်းစိတ်တွေဖြစ်လာရင် လက်နဲ့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးတောက်ဆုတ်လုပ်ပြီး ဂွေးထုလိုက်မှပဲ ဖီးတွေတက်ပြီး လရည် ဖြူဖြူတွေထွက်ပြီး ပျော့သွားတော့တယ်
သူကော စိတ်ဖြစ်ရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပွတ်လားပိပိလေးကို လက်နဲ့ဖွဖွလေးပွတ်ရင်း စိတ်ဖြေပေါ့
Me: ဘဲနဲ့ကော လုပ်ဖူးလား
Me: ဘဲက ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲ
Me: ပြောပြပါ တို့လဲ တို့ဆော်နဲ့လုပ်တာကို ပြောပြမယ်လေတယောက်နဲ့ တယောက် အတွေ့အကြုံ ဖလှယ်တာပေါ့သူ့ဘဲက သူ့ပိပိကို မှုတ်ပေးဖူးလားတို့က မလုပ်ခင် မှုတ်ပေးရတာကို ကြိုက်တယ်သူ့ပိပိကို ပါးစပ်နဲ့စုပ်ပေးပြီး လျှာလေးနဲ့ အစိလေးကို ကစားပေး... အကွဲကြောင်းလေးထဲ လျှာလေးထည့်ပြီး ကလိပေးသူ့ပိပိက အရည်လေးတွေ ရွှဲလာမှ ထည့်ရတာကောင်းတယ်
Moe: အမွှေးတွေ ထူတယ်နော် (ကျွန်တော့်စော်ရဲ့ ပိပိလေးပုံကို ပြလိုက်တယ်)
Me: ဒီလို ပိပိလေးတွေဆို စုပ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်
ကိုယ်စုပ်ပေးရင်းနဲ့ကို သူ ၂ခါလောက် ပြီးသွားတယ်သူကော အမွှေးရိတ်ထားလားအမှုတ်ခံရတာ ကြိုက်လားပိပိကို မှုတ်ပေးတာနဲ့ ပိပိထဲလီးကိုထည့်ထားတာ ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်လဲ
Moe: အင်းး ၂မျိုးလုံးကြိုက်တယ်
Me: လိုးတဲ့အခါမှာ ဖြေးဖြေးချင်း တချက်ချင်းလိုးတာနဲ့ ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုးတာ ဘယ်ဟာကို ပိုကြိုက်လဲ
Me: ပက်လက်လိုးခံရတာနဲ့ လေးဘက်ထောက်ခံရတာ ဘယ်ဟာကိုပိုကြိုက်လဲ
Me: ဘဲအပေါ်ကနေ တက်ထိုင်ပြီး လုပ်ဖူးလား
အဲဒါက ပိုထိတယ်ပြောတယ်တို့က ကောင်မလေးကို လေးဖက်ထောက်ခိုင်းပြီး အနောက်ကနေ ဒူးထောက်ပြီး သူ့ဖင်၂လုံးကို ကိုင်ပြီး လုပ်ရတာကို ကြိုက်တယ်..အဲဒါ အားရတယ်
Moe: လုပ် ဖူးတာပေါ့
Me: သူ့ဖင်ကို ကိုင်ထားပြီး ဖင်လုံးတွေကို ပွတ်ပြီး ဆောင့်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်
Moe: အပေါ်က နေ ခွထိုင် ပီး လုပ်ရတာ ကြိုက်တယ်
Me: ပြီးတော့ လက်မလေးနဲ့ သူ့ဖင်ပေါက်လေးကို ကလိပေးလိုက်ရင် ပိပိထဲ ၀င်နေတဲ့ လီးက ဖီလင်ကော ဖင်ပေါက်ကို လက်မနဲ့ ကလိတဲ့ဖီလင်ကော ၂မျိုးတပြိုင်တည်းခံရတာ ကောင်းတယ်တဲ့
Me: တို့လဲ စော်အပေါ်ကနေ တက်လုပ်ပေးတာကြိုက်တယ်
ကိုယ်က အောက်ကနေ ပက်လက်နေရင်း သူ့နို့လေးတွေကို လက်၂ဖက်နဲ့ ဆုပ်နယ်လိုက် ပြီးတော့ သူ့အစိလေးကို လက်ညီုးလေးနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်လုပ်တယ်အခု သူနဲ့ ချက်နေရင်းနဲ့ တို့ဖီးတွေဖြစ်လာပြီစော် မလုပ်ရတာ ၂ပတ်လောက်ရှိနေပြီတို့ဟာ အရမ်းတင်းနေတယ်
Moe: မိုး ဟာ က အရည်တွေ စိုလာပီ
Thanks given by: ဒေါ်က်တာမလေး , mgsexy69 , kyawkoo , wavecafe , Mg Wunnna
07-21-2016, 02:50 PM (This post was last modified: 07-21-2016, 03:24 PM by ဘိုးတော်.)
Me: အခုသူနဲ့ချက်နေရင်း တို့လီးကို လက်နဲ့ ဂွင်းတိုက်နေတယ် . . . စိတ်ကူးထဲမှာ မိုး ပိပိလေးကို မှန်းပြီး ယက်ပေးနေတာ
Moe: ကူတိုက်ပေးရမလား Me: အင်း တိုက်ပေးလေ . . . တို့လဲ မိုး ပိပိကို စုပ်ပေးမယ်မိုး ပေါင်၂ဖက် ဖြဲထားပေးနော်
Me: တို့ ယက်ပေးမယ် . . . မိုး ကော အခု ဘာလုပ်နေလဲ . . . မိုး ပိပိ ပုံလေး ပြပါလား။ တို့စိတ်ကူးနဲ့ လိုးချင်လို့တို့ လီး အရမ်းတင်းနေပြီဒစ်က ဖောင်းနေပြီတို့ စကားလုံးတွေ ပြောတာကြမ်းရင် စိတ်မဆိုးနဲ့နော်.. တို့က ၂ယောက်လုံး ပြောရင်းနဲ့ ဖီးဖြစ်အောင် အဲလိုပြောတာပါ
Me: သူမကြိုက်ရင် ခွင့်လွှတ်နော်
Moe: ဟုတ် . . . ရပါတယ်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲ
(သူ့ ပိပိပုံလေး ပို့ပေးတယ်)
Me: သူ့စောက်ပတ်လေးက လှလိုက်တာ
အမွှေးတိုတိုလေးတွေဆိုတော့ ယက်လို့ အရမ်းကောင်းမှာပဲ
Moe: အကို့ လီး လည်း ပြလေ
Me: ယက်မယ်နော် Moe: ဟုတ်
(ကျနော့် ဒုတ်ပုံ ပို့ပေးလိုက်တယ်)
Moe: အရှည်ကြီး ပဲနော် . . . စုပ်ပေးမယ်နော်
Me: စုပ်ပေးပါ . . . ကိုယ့်လီး အရမ်းတင်းနေပြီ
Moe: ပြွတ် ပြွတ်
Me: မြန်မြန်စုပ်ပေးပါ မိုးရယ်.. တို့လီး အရမ်းတင်းနေပြီ
သူ့စပ်ပက်လေးကို အကွဲကြောင်းလေးထဲ လျှာနဲ့ ထိုးပေးမယ်နော်
Moe: အားးးး ကောင်းလိုက်တာ… အခု ပိပိက အရမ်းယားနေပြီ
Moe: မိုးလည်း ပြန်စုပ်ပေးမယ်နော်
Me: ထည့်ချင်ပြီ မိုးရယ်မိုး စပ်ပက် လေးကို ဖြဲပေးပါ
မိုးစပ်ပက်လေးထဲ တို့ ဒစ်ကို ထည့်ချင်နေပြီ
မိုးကို နို့လဲ စို့မယ်နော်
Moe: ထည့်ကွာ ရတယ်
Me: မိုး လေးဖက်ကုန်းပေးပါလား
အနောက်ကနေ လေးဖက်ထောက် လိုးချင်တယ်အား... ကောင်းလိုက်တာ မိုးရယ်...
Moe: ကုန်းလိုက်ပီ အကို
Me: မိုးဖင်လေးကို လက်၂ဖက်နဲ့ ကိုင်ဖြဲပြီး မိုးစပ်ပက်လေးထဲ တို့လီးကို ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်နေပြီ
Moe: ထမိန် ၀တ်ထားတယ် ချွတ်ပေး
Me: အင်းး ထမိန်ကို အပေါ်ကို လှန်တင်လိုက်ပြီ
မိုး စပ်ပက်လေးက ကြပ်နေတာပဲမိုးဖင်လုံးလေးတွေ လုံးအိပြီး ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ
Moe: ဟုတ် ကိုင်နော်
Me: အခု မိုး အဖုတ်လေးထဲ တို့ လီးဝင်သွားပြီ
မိုးဖင်လုံးလေးကို ကိုင်ပြီး တချက်ချင်းဆောင့်နေတာ
အားးးးတကယ် ခံပေးနေရသလို ပဲ လိုးပေးကွာစိတ်တအား ဖြစ်နေပီ
Me: အခု ဆောင့်တာ မြန်လာပြီ မိုး
Moe: အားးး အားးး
Me: ဗြွတ် ဗြွတ်
Moe: မိုးစက်ပတ်ကိုး အားရပါးရ လိုးကွာ
Me: မိုး ဖင်ကို ကော့ထားပေးကွာ
ဖတ် ဖတ် ဖတ်
Me: အား.. ကောင်းလိုက်တာ မိုးရယ်
Moe: အားးးးးးးး အားးးးးးးး
Me: ကိုယ့်လီးကို မိုးစက်ပက် အထဲက တအားစုပ်ပြီး ဆွဲထားတာ ကောင်းလိုက်တာ
Moe: စောက်ပတ် ထဲ လီး ထိုးထည့်ပေးကွာ
ဖုန်းဖုန်းဖုန်း အခု အရမ်းဆောင့်နေပြီမိုးစောက်ပတ်က အရည်တွေ စီးကျနေတယ်ကောင်းလိုက်တာမိုးရယ်
Moe: ကောင်းတယ် ကို တကယ် အလိုးခံနေရတယ်လို့ စိတ်ထဲ မြင်နေတယ်
Me: တို့ ပြောရင်းနဲ့ တို့လီးကို ထုနေတယ်
မိုး ပက်လက်လှန်ပေးကွာမိုးခြေထောက်၂ချောင်းကို မြှောက်ပြီး တို့ပုခုံးပေါ်တင်ပြီး အပေါ်ကနေ ဆောင့်ချင်တယ်
Moe: မိုးလည်း စောက်ပတ် နှိုက်နေတာ
Me: အပေါ်က အားရပါးရ ဆောင့်မယ်နော်
ဖတ် ဖတ် ဖတ် တို့လီးက မိုးစောက်ပတ်ထဲ ၀င်လိုက် ထွက်လိုက် လိုးနေတုန်း တို့ ဂွေးဥက မိုးဖင်ကို ဖတ် ဖတ် ဆိုပြီး ရိုက်နေတာ
Moe: စက်ပတ် ဖြဲပေးထားတယ် ကို
Me: ကောင်းလိုက်တာ မိုးရယ်
Moe: အာာာာ လိုးကွာ
Me: မိုးစောက်ပတ်က လိုးလို့ အရမ်းကောင်းတာပဲ
Moe: စိတ်ရှိသလောက် ချ ကွာ
Me: မိုးစောက်ပတ် အရည်ရွှဲနေတုန်း မြန်မြန် ဆောင့်မယ်
Moe: တအား ယားတက်နေပီ
အကို ညျောင်းနေရင် မိုး တက်လိုးပေးမယ်
Me: တက်လိုးပေးပါ မိုး
တက်ခွပီ မိုး ဖင်ကို ကိုင်ထား
Moe: အင့် ကွာ အင့်ကွာ စောင့်ချပေးတယ်
Me: အဆုံးထိ ဆောင့်ထိုင်ပေးမိုး
Moe: အားးးးးးးး စက်ပတ် တအား ယားတယ်
Me: မိုး စပ်ပက်ဖြဲထားတဲ့ပုံလေး ပြပါလား
Moe: ပီး ရင် ပြမယ် နော်
Me: တို့လီးထိပ်မှာ အရည်ကြည်လေးတွေ ထွက်နေပြီ
Moe: အဖုတ် ထဲ လီး ပြည့်ညှပ်နေတာပဲကွာ
Me: မိုးစက်ပက်ကလဲ လိုးလို့အကောင်းဆုံးစောက်ပက်ပဲ
Moe: ဖင်ဝ ကိုလဲ ခုနက ပြောသလို နှိုက်ပေးနော်
Me: အပေါ်ကနေ အားရ ပါးရ မြန်မြန်ဆောင့်ပေးနော်
Me: သူ့ဖင်လုံးကို လက်တဖက်က ကိုင်ပြီး နောက်လက်တဖက်က လက်မနဲ့ သူ့ဖင်ပေါက်ကို ကလိနေတယ်
လီးကလဲ စောက်ပတ်ထဲ အဆုံးထိ ထည့်ပြီး လိုးနေတယ်နော်ကောင်းလား မိုး
Me: လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာ မိန်းမရယ်
နေ့တိုင်း အဲလိုလိုးမယ်နော်နေ့တိုင်း ခနခန လိုးကြမယ်နော်
Moe: ဟုတ် ယောက်င်္ကျား
မိန်းမ ကို နေ့တိုင်းလိုးပေးကွာ
Me: မိန်းမ စိတ်ကျေနပ်တဲ့အထိ လိုးပေးမယ်
အခု ဒီပုံစံနဲ့ လိုးနေတာ[img=781x27]file:///C:\_Users\_MR729D~1.MYI\_AppData\_Local\_Temp\_msohtmlclip1\_01\_clip_image001.jpg[/img]
Moe: မိုက်တယ် ပုံက
Me: အဲလိုမျိုး လိုးနေတာ
Moe: မိုးလည်း အဲ့လို ကုန်းပေးပီး ခံချင်တယ်
Thanks given by: ဒေါ်က်တာမလေး , mgsexy69 , kyawkoo , Kyaw kyaw007 , striker_22
07-22-2016, 12:04 PM Moe: အင်းးး
Me: မိန်းမ ပြီးခါနီးပြီလား
Moe: ယောင်္ကျား လို့ ခေါ်မယ်နော်ပီးတော့ မယ် တအား စိုနေပီ
Me: ခေါ်လေ မိန်းမရဲ့
Moe: ပုံတွေ ထပ်ပို့နော်
Me: တို့တွေ လင်မယားမို့လို့ ဒီလို လိုးနေတာပေါ့
me: ပို့ပေးမယ် မိန်းမ
မိန်းမ စောက်ပတ်လဲ ပြဦးလေ တို့ လရည် ထွက်ခါနီးပုံတွေ ရိုက်ပြီး ပို့ပေးမယ်
Moe: (သူ့ပိပိကို ပွတ်နေတဲ့ ပုံပို့ပေးတယ်)
Me: မိန်းမ စပ်ပက် အရည်တွေ ရွဲနေပြီနော်
Me: မိန်းမ လက်ဖယ်ပြီး ရိုက်ပို့ပေးဦး
မိန်းမ စောက်ပတ်ကို ရှင်းရှင်းလေးကြည့်ပြီး လိုးချင်လို့
Moe: ပီးမှ ဆက်ပို့ မယ် လိုးဦးကွာ
Me: မိန်းမ စောက်ပတ်ကို နေ့တိုင်း လိူုးမယ်နော်
Me: မလိုးခင် နေ့တိုင်းမှုတ်ပေးမယ်
Moe: ယောကျားလိုးချင်တုန်း ကုန်းပေးမယ်
Me: မိန်းမ စက်ပက်က အရည်တွေရွှဲလာရင် ယက်ပေးမယ်
ကုန်းပေးမိန်းမအနောက်က ခွေးလိုးသလို အားရ ပါးရ လိုးချင်တယ်
Moe: ဒါဆို ယောကျား လီးရေ တွေ ရွဲလာရင်လည်း မျိုချမယ်
အင်း ဒါဆို ခွေးမလေးတွေ လို လေးဘက်ထောက် ကုန်းထားတယ်နော်
Me: ကောင်းလိုက်တာ မိန်းမရယ်
Moe: ကြိုက်ရဲလား ကို
Me: မိန်းမ ဖင်လုံးကြီးကို ဖြန်းဖြန်းနဲ့ ရိုက်ပြီး လိုးမယ်
ကြိုက်တယ် မိုးရဲ့  မိုးကိုသာ လိုးနေရရင် ထမင်းတောင် စားဖို့ မလိုတော့ဘူးအခု မြန်မြန်လေးဆောင့်နေတယ်
Me: တဆုံးဆောင့်မယ် မိန်းမ
မိန်းမ သားအိမ်ခေါင်းထိ တို့လီးဝင်အောင် ဆောင့်ထည့်မယ်နော်
Moe: စောင့် အားးးးကောင်းတယ်တကယ် ကောင်း တယ် ကိုရယ်
Moe: မိန်းမ ဖင်ကုန်းထားတယ် လိုးနော်
Me: မိန်းမ ဖင်လုံးကို ကိုင်ပြီး လိုးနေတယ်
Moe: အမလေး ကောင်းလိုက်တာ်
မိုး ပီးတော့မယ် ထွက်ခါ နီးနေပီ
Me: မြန်မြန်ဆောင့်ပေးမယ်မိုးပြီးအောင် ပွတ် တို့လဲ ဂွေးထုနေတယ်လရည်ထွက်ခါနီးပြီပြီးရင် အရည်တွေ မသုတ်ပဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးနော်အရည်ရွှဲနေတဲ့ပုံ ပို့ပေးနော်
အားးးအမလေးးးးအားးးးမိုးဖင်ကို ချ ပါ အားးးးးမိုး ဖင်ကို တဆုံး ချတော့ အားးး
Me: အခု မိုးဖင်ထဲ တို့လီးထည့်တော့မယ်
Moe: အင်း ဖင်ပါ ခံပေးမယ် ကွာ
Me: အားး ကြပ်လိုက်တာ မိုးရယ်
Me: မိုးဖင်ကို လိုးရတာ နတ်ပြည်ေ၇ာက်သလိုပဲ
မိုးဖင်ထဲကို တို့လီးကို တဆုံးထည့်နေတယ်အခု ဆောင့်နေပြီ
Moe: မိုး ပီးပီ ကို ထွက်ကုန်ပီ
Me: မိုးဖငိထဲမှာပဲ တို့လရေတွေ ထုတ်လိုက်မယ်နော်
Moe: ဖင်ချ တယ်လို့ ပြောလိုက်တာ ထွက်ကုန်တယ်
Moe: ဇာတ်ကားတွေ ထဲက လို မိုး မျက်နှာပေါါ်ပန်းပေးပေါ့ ယောကျားရဲ့
Me: မိုးဖင် ၂လုံးကို ကိုင်ပြီး မိုးဖင်ထဲ လီးအဆုံးထိ ထည့်ပြီး ဆောင့်လိုးနေတာ
ပန်းတော့မယ် မို့ပါးစပ်ပါ ဟ ထားပေးဗျစ် ဗျစ်
Me: တို့ လရေတွေ သူ့မျက်နှာပေါ်မှာ ပေကုန်ပြီ
Moe: အားးး ကောင်းတယ်
Me: လရေ တွေ အကုန်ထွက်သွားအောင် စုပ်ပေး မိန်းမ
Moe: ကောင်းတယ် အဲ့လို ညစ်ပတ်ပတ် ပြောတာ ပိုကြိုက်တယ်
Me: စုပ်ပေးပါ မိန်းမ
Me: ပါးစပ်ထဲမှာ ဆက်လိုးလိုက်မယ်
Moe: မိုး ခန နားဦးမယ် ၂ နာရီလောက် ပြန်လာခဲ့မယ်နော်
Me: မိုး ပုံလေးတွေ ပို့ပေးလေ
Moe: မိုး ညစ်ပတ်နေပီ ရေချိုးချင်ပီနော်
Me: မိုး စက်ပက်က်ု ကြည့်ပြီး ပြီးအောင် ထုချင်လို့
မိန်းမ စပ်ပက်ကို အချိန်တိုင်း ကြည့်ပြီး လိုးချင်နေလို့တို့က စိတ် အရမ်းထန်တယ်တနေ့ကို ၃ခါလောက် ဂွေးထုရတယ်တခါတလေ ၄ခါ ထုတယ်
Moe: ယောကျားလဲ လိုးတဲ့ ပုံတွေ ပို့ထားနော်
Me: အင်းး ယောက်ကျားရှာလိုက်မယ်
နေ့ခင်း လိုးဦးမယ်နော် အခု တို့ပြီးအောင် ဂွေးထုချင်တယ်
Thanks given by: soe007 , mgsexy69 , မောင်ဇော် , sharigan , ဒေါ်က်တာမလေး , kyawkoo , ဆြာသြ , Kyaw kyaw007
07-27-2016, 11:01 AM Me: မိုး... ချစ်လေး
ပုံတွေပို့ထားတာ ရလားအဲဒီပုံတွေထဲကလို မိန်းမကို လုပ်ချင်တယ်မနေ့က အိုကေလားပြီးကော ပြီးသွားလားတိုတော့ ၂ခါလောက် ပြီးသွားတယ်
Me: ခုမနက်တောင် မိုးလေးကို သတိရပြီး စိတ်တွေဖြစ်နေလို့ ခုနက တခါ ဂွေးထုလိုက်တယ်
မနေ့က ချက်ထားတာလေးတွေ ဖတ်ပြီး စိတ်ကူးထဲမှာ မိုး ကိုမှန်းပြီး ထုလိုက်တာ
Me: ပုံတွေ ကြည့်လို့ရလား
Moe: ဆောရီး သူငယ်ချင်းလာနေလို့ပါ
Me: အော်... အိုကေ အိုကေ
Moe: ပုံတွေ ကြည့်လို့ရပါတယ်
ခန နော် ငါးမိနစ်
Me: အိုကေ ချစ်
Me: friend လာလည်တာလား
Moe: အင်း ပြန်သွားဘီ
Me: ဒီနေ့ဘယ်မှ မသွားဘူးလား
Moe: နေ့လည် လောက်တော့ သွားစရာ ရှိတယ်
Me: ဒီနေ့ အိပ်ရေးဝရဲ့လား
Moe: ၀ ပါတယ်
Me: မနေ့က ပြီးသွားလား လက်နဲ့လုပ်တာ
Moe: အကို နာမည် က ဘယ်လိုခေါ်လဲ နော်
Moe: ဟုတ် မှတ်ထားမယ်နော်
ခနနော်.. Moe: ဟုတ်
Me: ပုံလေးတွေ ကြိုက်လား
Me: ဒီနေ့ စိတ်ပါလား
Moe: ကြိုက်တယ် အဲ့လို လေး တွေ ရှိသေးရင် ထပ်ပို့ပေးနော်
Me: အင်းး ပို့ပေးမယ်
Moe: အခု ထိတော့ သိပ်မပါသေးဘူးလေ
Me: ပုံတွေကြည့်ပြီး စိတ်ကူးကြည့်ပေါ့
Moe: အွမ်း တစ်ယောက်တည်း
Me: စိတ်ပါအောင် ပြောပေးမယ်လေ
Me: အခန်းတံခါး သေချာပိတ်ထားဦး
Me: အဲဒါဆို အင်္ကျီချွတ်လိုက်
Moe: အဲ အဲ့လို ကြီးတော့ မနေရဲဘူး
Me: အဲဒါဆိုလဲ မချွတ်နဲ့.. အင်းကျီပေါ်ကပဲ နို့လေးတွေကို ပွတ်ပေးမယ်
Moe: ဟုတ် ဘော်လီကော အောက်ခံ ဘောင်းဘီ ကော ချွတ်ထားတယ်
တီရှပ် နဲ့ ထမိန် နဲ့ ၀တ်ထားတယ်
Me: အဲဒါဆို တီရှပ်ပေါ်ကနေ မိုး နို့လေးတွေကို တို့ လက်ဝါးနဲ့ ပွတ်ပေးနေတယ်...
ပြီးတော့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို လက်ညိုးလေးတွေနဲ့ ပွတ်ချေပေးမယ်နို့သီးခေါင်းလေးတွေ မာတင်းလာပြီလားအဲလိုလေး ထမိန်ကို လှန်ပြီး ပိပိလေးကို ပွတ်ပေးမယ်နော်တို့ လီးကို မိုး လက်လေးနဲ့ ကိုင်ထားနော်
Me: အဲလောက်မကြီးပါဘူး... အနီးကပ်ရိုက်ထားလို့ ကြီးတယ်ထင်ရတာ
တချိုးကောင်မလေးတွေက ကြီးတာ ကြိုက်တယ်
Moe: ကိုင်ပီး စုပ်ပေးချင်တယ်
me: မိုး ကော ကြီးတာကြိုက်လား သေးတာ ကြိုက်လား
Moe: အနေတော် ပဲ ကြိုက်တယ် အရမ်းကြီးရင်တော့ ကြောက်တယ်
Me: အင်းး တို့ လီးက အရမ်းမကြီးပါဘူး
မိုး အဖုတ်လေးနဲ့ အနေတော်ပဲ နေမှာ
Moe: ကို က မတ်တပ်ရပ်ထား မိုးက ထိုင်ပီး စုပ်ပေးမယ်
Me: မိုး အဖုတ်လေး ပြ ဦးလေ.. တို့ စိတ်တွေ ဖြစ်လာပြီ
မိုးက ထိုင်ပြီးစုပ်ပေးနေတုန်း မိုးခေါင်းလေးကို ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ လိုးမယ်နော်မိုး စပ်ပက်လေးကို စုပ်ပေးချင်တယ်
Me: အစိလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို စုပ်ချင်တယ်
Moe: ပြွတ် ပွတ်
မိုး အရင် စုပ်ပေးမယ်လေ ပီးမှ မိုး ကို ပြန် ယက်ပေးနော်
Me: မိုး စပ်ပက် နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို လျှာနဲ့ အပြားလိုက် အပေါ်အောက် ယက်ပေးမယ်
အင်းးးစုပ်ပေးပါ မိုးရယ်တို့ လီး အရမ်းထောင်နေပြီ
Moe: နုတ်ခမ်း ကို ဖိ ထားပေးမယ်
Me: တဆတ်ဆတ်နဲ့ တုန်နေတယ်
Me: ကောင်းလိုက်တာ မိန်းမရယ်...
Moe: အင်း ယောက်ကျား စုပ်လို့ ကောင်းတယ်
Me: မိန်းမ စပ်ပက်ထဲ တို့လီးကို ထည့်ပြီး လိုးချင်ပြီ မိန်းမရတယ
်ရယ်*မိန်းမ စပ်ပက်လေး ပြဦးလေ.. တို့ စိတ်ကူးချင်လို့
Me: မိန်းမနို့တွေက လုံးနေတာပဲ
Moe: အင်း စို့ ပေနော်ေ.ယာက်ကျား
Me: နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို စုပ်မယ်နော်
ပြီးတော့ လျှာဖျားလေးနဲ့ နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို ကလိမယ်
Moe: အားးး ကိုရယ်
Me: မိန်းမ နို့က တင်းနေတာပဲ ကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ
Moe: နို့သီးခေါင်းလေး တွေ ကို စုပ်ပေး
Me: နို့စို့နေတုန်း မိုးစပ်ပက်လေးကို လက်တဖက်နဲ့ ပွတ်ပေးမယ်နော်
နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဖိပြီး စို့မယ်
Me: မိုးစပ်ပက်လေးက အရည်လေးတွေ ထွက်လာတော့ ပွတ်လို့ ပိုကောင်းတယ်
အစိလေးကို လက်ညျိုးလေးနဲ့ ပွတ်နေတာ
Moe: ထွက်နေပီ ကို
Me: မိုး ပက်လက်လန်ပြီး ပေါင်ကားပေးနော်
Moe: နို့သီး ခေါင်းလေးတွေကို လီးထိပ်လေး နဲ့ ပွတ်ပေး
Me: မိုး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကိ လီးထိပ်နဲ့ ပွတ်နေတုန်း မိုးက ကို့ ဥလေးတွေကို ပြန်ပွတ်ပေး
Moe: အင်း ပွတ်ပေးနေတယ်
Me: 69 ပုံစံ သိလား
Moe: အရမ်းကောင်းတယ် ကို
Me: အဲလို လုပ်မယ်နော်
Moe: ဟုတ် သိတယ်
မိုး အပေါ်က နေရမှာလား
Me: အင်းး မိုးက အပေါ်ကနေပြီး ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မှာ ဖင်ပေးထား
ပြီးတော့ ကို့လီးကို အပေါ်ကနေ စုပ်ပေးမိုး စပ်ပက်က ကိုယ့်ပါးစပ်ပေါ်မှာ ကွက်တိ
Moe: အင်း ကို
အင်းးစုပ်ပီနော်မိုးး ဖင်ကို ကိုင်ထားနော်
Me: ကို့လျှာလေးကို ထုတ်ပြီး ထောင်ထားတယ်.. မို့က ထင်လေး ကြွလိုက် မြောက်လိုက်လုပ်ပြီး ကိုယ့်လျှာနဲ့ မိုးစပ်ပက်ကို လိုးသလိုလုပ်
Moe: အင်း လုပ်နေပီကို
အားးးး စက်ပတ် ယားလိုက်တာ
Moe: အားးး ဟုတ်တယ် ကို
Me: အခုချက်ရင်းနဲ့ မိုးစပ်ပက်ကို ပွတ်နေနော်
Moe: အရမ်း စိတ်ကြွပီကွာ
Me: ကိုလဲ လီးကို လက်နဲ့ ဂွေးထုနေတယ်
Me: ကို့လီးက အရမ်းတင်းနေပြီ
Moe: စုပ်လို့ ကောင်းနေတုန်းကို
Me: ဒီလို စုပ်နေတာလား မိုး
ကိုပို့ တဲ့ ပုံတွေ အရမ်း ကြိုက်တာပဲကွာ
Me: ကိုလဲ မိုးကို အဲဒီပုံတွေထဲကလို လုပ်ချင်တာ
ပုံတွေ ထပ်ပို့ဦး စိတ်ပါတယ် Me: မိုး စပ်ပက်ကို အဲလို မှုတ်ပေးနေတာစပ်ပက်ကို မှုတ်ရင်းနဲ့ လျှာနဲ့ မိုးဖင်ပေါက်လေးကို ထိုးပေးနေတယ်
Moe: အားးး မိုက်တယ်
Me: မိုးဖင်ပေါက်လေးက ယားလို့ ကျုံ့ကျုံ့သွားတယ်
Moe: ဖင်ဝ ကို ယက်ခံရတာ အကြိုက်ဆုံးပဲ
Me: ကိုလဲ ဖင်ပေါက်ကို လျှာနဲ့ယက်ပေးရတာ အရမ်းကြိုက်တယ်
မိုး ဘဲ အဲလို လုပ်ပေးဖူးလား
လုပ်ပေးဖူးတယ်ပီးတော့ တက္ကသိုလ် တုန်းက အခန်းဖော် သူငယ်ချင်း နဲ့ တစ်ယောက်တလဲ ယက်ပေးကြဖူးတယ်
ခု သူက ယောကျာ်းရသွားပီ
Moe: အခန်းထဲမှာ ညဘက် အဲ့ကား ခိုးကြည့်ရင်း နဲ့ မိန်းကလေးချင်း လုပ်ပေးတဲ့ ဇာတ်ကားကြည့်ပီး စမ်းကြည့်ကြတာ
Moe: အဲ့တုန်းကတော့ ကောင်းတယ် ဘဲဘဲ နဲ့ နေဖူးပီးတော့ သိပ်မကောင်းတော့သလိုပဲ
Me: ဘဲဘဲက ဖင်ပေါက်ကိုကော လုပ်ပေးဖူးလား
ခံပေးဖူးတယ်ကိုမိုး အဖုတ်ထဲ တအား ယားလာတယ်
Me: အဲဒါဆို လိုးတော့မယ်နော်
မိုး ပက်လက်လှန်ပြီး ပေါင်ကားပေးထား
Moe: ဟုတ် ကားထားပီ
Me: ဒီလိုလေး ထည့်လိုက်ပြီနော်ပြီးတော့ တချက်ချင်း မှန်မှန် ဆောင့်နေတယ်
Me: ဆောင့်နေတုန်း မိုး နို့တွေကို လက်နဲ့ နယ်နေတယ်
Moe: အင်း နယ်ပေး
Me: အခု မိုးစပ်ပက်ထဲက အရည်တွေ ပိုထွက်လာတော့ ဆောင့်လို့ပိုကောင်းတယ်... ခု မြန်မြန် ဆောင့်နေတယ်
Moe: ကောင်းတယ် ကို
မြန်မြန် လေး စောင့်လိုးပေး
Me: မိုးက အောက်ကနေ ဖင်ကြီး ကော့ကော့ပြီး ခံပေး
မိုး အပေါ်တက်ပေးအဲလို လိုးမယ်နော်
Moe: အစွပ် နဲ့ ကြိုက်ဘူးနော်
Me: ok.. အစွပ်ချွတ်လိုက်ပြီမိုး အပေါ်ကနေ မှန်မှန်ဆောင့်ပေးမိုး စပ်ပက်ထဲ ကို့ လီးက အဲလို ၀င်နေတာ
Me: မိုးစပ်ပက်လေးကို ပေါင်ကားပြီး ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေး ပို့ပေးပါလား
Moe: ဘယ်လို ရိုက်မလဲ
Me: ထိုင်ပြီး ကိုယ့်ဟာကိုပဲ ရိုက်လိုက်ပါလား
ကြည့်ချင်လို့တို့ စိတ် တွေ အရမ်းဖြစ်နေပြီ
Me: မိုးကို အရမ်း လိုးချင်နေပြီ
Moe: ရှေ့ကပဲ ရိုက်တတ်တယ်
Me: အဲဒါဆိုလဲ ရှေ့ကပဲ ရိုက်ပေး
စပ်ပက် အကွဲလေးနဲ့ အစိလေး ပေါ်အောင်ရိုက်နော် မိန်းမ
Me: မိန်းမနဲ့ ဒီနေ့ တနေကုန် လိုးနေချင်တယ်
မိန်းမ ကော အလိုးခံချင်လားအဲလို စုပ်ပေးနော်
Me: ပေါင်ကားပြီး စပ်ပက်လေးပြဦးလေ
Moe: ရှက် ရှက်
Me: မရှက်ပါနဲ့ မိန်းမရဲ့
မိန်းမက အရမ်းလှတယ်မိန်းမ ပိပိလေးက ချစ်စရာလေး နေမှာမိန်းမ ပိပိလေးကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ မှုတ်ပေးမယ်နော်
Moe: ချိုပဲ စို့
Me: ဗိုက်လေးကို လျှာနဲ့ ယက်မယ်နော်
မိုးရှေ့မှာ ၀မ်းလျားမှောက်ပြီး မိုးပေါင်ကြားထဲ မျက်နှာထည့်ပြီး မိုးစပ်ပက်လေးကို ယက်ချင်တာ
မိုး နို့လေးတွေက အရမ်းမိုက်တယ်ဖောင်းပြီး တင်းနေတာပဲမိုး အနားမှာသာရှိရင် တနေကုန် အခန်းထဲက မထွက်ပဲ လိုး နေမှာမိုး စပ်ပက်လေးကို လိုးလိုက်... မှုတ်ပေးလိုက်မိုးဖင်ပေါက်လေးကို ဂျယ်လ်သုတ်ပြီး ကို့ လီးကို ထည့်ပြီး အနောက်ကနေ အားရ ပါးရ ဆောင့် လိုးချင်တာမိုး က လေးဖက်ထောက်ထားပေး... ကို က နောက်က နေ ဒူးထောက်ပြီး မိုးဖင်လုံးလေးကို လက်၂ဖက်နဲ့ ကိုင်ပြီး ကို့လီးကို မိုးဖင်ပေါက်ထဲ ထည့်ပြီး လိုးချင်တာအဲလိုလေး လိုးချင်တယ် မိန်းမမိန်းမရ အလုပ်များနေလား
ကိုအကိုဘာလုပ်နေတာလဲ ပြန် လဲ မပြောဘူး
Moe: လိုင်း ကျ တာ ကို
Me: မိုး အပြင်သွားပြီထင်လို့
Moe: ခန နေ စားမယ်
Me: ခုနက ပြီးသွားပြီလား
Moe: ကို ပို့ တဲ့ ပုံတွေ အရမ်း ခိုက်တယ်
Moe: ဘယ်ပီး မလဲ တန်းလန်းကြီး
Moe: သူပဲ မိန်းမ ကို ပစ်ထားခဲ့ပီးတော့
မိန်းမ ပြီးသွားပြီထင်လို့ ယောက်ကျားက ထမင်းသွားစားတာပါ
Moe: မိန်းမ ကို ပီး အောင် လိုးပေး
Me: မိန်းမသာ အနားရှိရင် ထမင်းတောင် ထ မစားဘူး
Me: မိုးအနောက်ကနေ ဒူးထောက်ပြီး ကို့ လီးကို ကိုင်ပြီး မိုး စပ်ပက်မှာ တေ့လိုက်ပြီ
Moe: စက်ပတ်ထဲ မထည့် နဲ့
ဖင်လိုးပေးမနေ့က ဖင်လိုးပေးတယ် ပြောလိုက်တာ မိုး ချက်ချင်း ပီးသွားတယ်
မိုးဖင်ပေါက်ဝလေးကို ဂျယ်လေးသုတ်ပြီး ကို့ လီးထိပ်တေ့ပြီး ဖြည့်ဖြည်းချင်းထည့်နေတယ်
Moe: ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ပြောပေး
Me: မိုး ဖင်ကို ဖြန်းကနဲ ရိုက်ပြီး မိုး ဖင်၂လုံးကို ကိုင်ပြီး ကို ဒူးထောက်ပြီး ဆောင့်နေတယ်
Me: မိုး ဖင်ပေါက်လေးက ကြပ်နေတာပဲ မိုးရယ်..
အိုးးးးးချ ယောကျား မိုး ဖင်က ယောကျား အတွက်ပဲချ နော်စိတ်ကြိုက်လိုး
Me: ကိုယ့်လီးတချောင်းလုံး မိုးဖင်ထဲမှာ စည်းကြပ်ပြီး ၀င်လိုက် ထွက်လိုက်နဲ့ လိုးနေတာ
ကောင်လိုက်တာ မိုးရယ်ကိုယ် အခု မြန်မြန်ဆောင့်နေတယ်
Moe: ကို မိုး ပီးတော့မယ်
ပြွတ် ပြွတ်ပြွတ် ပြွတ်ဖင်ကို ကော့ထားပေးမိုး
Moe: ဖင်ပြဲတဲ့ အထိ လိုးပေး
Me: ကို့လီးကို မိုးဖင်ထဲ တဆုံးထည့်ပြီး လိုး
Me: ဗျစိ ဗျစ်
Moe: ထွက်ကုန်တယ် ကို
Me: မိန်းမ ကို လိုးရတာ အရမ်းအရသာရှိတာပဲ
Moe: အရည်တွေ ရွဲကုန်ပီ
Me: ကောင်းတယ် မိုး
Me: အရည် ရွှဲတာလေး ပြပါလား
Moe: တာတာ နော် ရေချိုးတော့မယ် နေ့လည် ခင်းလာဖြစ်ရင် လာခဲ့မယ်နော်
Thanks given by: ဒေါ်က်တာမလေး , kyawkoo , ဆြာသြ , ScaredPp , mgwahh , Kyaw kyaw007 , kyawswar123 , striker_22
nwinthit@gmail.com Junior Member
08-01-2016, 03:52 PM ငါလဲ လိုးချင်တာ
Thanks given by: MRX
joker99 Junior Member
08-05-2016, 07:31 AM ဘယ်မမချက်မလဲခင်ဗျာ
beandiesel Junior Member
12-30-2016, 11:23 PM အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ပုံတွေရောတင်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ